Izay tsara fiomanana tsy ho tampohin'ny loza : fantaro ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro eo amin'ny fahasalamana. Mihamafy ny voka-dratsin'ny fiovan'ny toetrandro amin'izao vanim-potoana iainantsika izao amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Misy ireo fepetra noraisina tsara ho fantatry ny rehetra hitandrovana ny tontolo iainana sy hampihenana ny aretina sy ny fahavoazana ara-pahasalamana vokatra ny fahasimban'ny tontolo iainana.
Isika tsirairay avy no biriky mandrafitra ny rindrin'ny tranom-pahavanonana. Aoka harisika isika hanao jeritodika ny tontolo androm-piainana ary entina ao amin'ny vavaka izay atao amin'Andriamanitra. Fandraharana "Mba ho vanona" iarahana amin'i Jeneraly Désiré Philippe Ramakavelo.
Pejy 1 amin'ny 72